Home News RW Kheyre iyo Cabdiwali Cali Gaas oo ku heshiiyay shaqsigii lagu bedeli...
RW Kheyre iyo Cabdiwali Cali Gaas oo ku heshiiyay shaqsigii lagu bedeli laha wasiirka arrimaha dibadda (Waa kuma)
RW Xasan Cali Kheyre iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda JFS Axmed Ciise Cawad oo in dhaweydba ay dhex tiilay is afgaran waa, aya habeenkii xalay aha waxaa RW Kheyre iyo hoggaamiyaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas ay ku heshiiyeen shaqsigii lagu bedeli laha Axmed Ciise Cawad.
Cabdiwali Cali Gaas aya soo jeediyay in lagu bedelo shaqsi magaciisa lagu sheegay Burhaan Diyo Miyo oo hore u aha agaasimaha xafiiska RW xilligii uu Cabdiwail Cali Gaas uu aha RW dowladdii KMG.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Axmed Ciise ayaanan lagu arag saaxadda siyaasadda arrimaha dibadda tan iyo markii uu ka hor yimid go’aankii dowladda federaalka ah ay ku joojisay diyaarad lacag u waday ciidanka XDS, sida ay sheegtay safaaradda Imaaraadka ee magaalada Muqdihso. Wasiirka iyo RW ayaanan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya waana midda keentay in uu tuhun soo kala dhex galo Fahad Yaasiin Agaasimaha Madaxtooyada iyo RW Kheyre.
Axmed Ciise Cawad aya ka mid ah ragga aadka ugu dhow dhow Fahad Yasin, balse hadda waxa ay u muuqata in go’aan iyo heshiis laga gaaray in la bedelo Wasiir Axmed Ciise Cawad.
Previous articleKulan Maanta ay yeelan Lahaayen Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle Oo baaqday Kooram la’aan
Next articleWarar Dheeraad ah Oo Laga helayo Saraaliik Katirsan CID-da Oo Xabsiga dhaxe loo taxaabay